L'Heure Bleue dia nahazo loka volamena teto Madagascar
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » L'Heure Bleue dia nahazo loka volamena teto Madagascar
Novambra 30, 2017
Ao amin'ny zaridaina tropikaly maitso i L'Heure Bleue dia manana toerana tokana ao Nosy Be izay fantatra amin'ny maha paradisa nosy azy. Ny L'Heure Bleue dia misy efitrano fandraisam-bahiny 8 sy bungalow 10 amoron-drano izay nahazo loka marobe tamin'ny fanamboarana ny tontolo iainana sy ny famolavolana sy ny haingon-tsoratry ny mpamorona lamaody Frederique Glainereau.
Green Globe miarahaba L'Heure Bleue amin'ny fahazoana mari-pahaizana volamena mandritra ny dimy taona nifanarahana.
Mba hampihenana ny fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana, ny tafo ravinala sy ny hazo eo an-toerana no fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny fananganana trano ary vita eto Madagascar avokoa ny fanaka rehetra. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia natao hampifangaroina amin'ny tontolo sy hampangatsiaka amin'ny rivotra voajanahary fa tsy ny rivotra iainana hampihena ny fampiasana angovo.
Ireo mpiasa zokiolona dia miara-miasa akaiky amin'ny Tanana Madio, fikambanana iray mitantana ny fitantanana ny fako. Izany dia nahatonga ny fanatsarana sy ny fanangonana ny fako eo an-toerana. Ny L'Heure Bleue koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny famolavolana paikady fanalana fako any Nosy Be. Ankoatry ny fanangonana fako dia voalamina ny fanadiovana ny tsena, ny arabe sy ny tatatra ary resahina ny lohahevitra hanatsarana ny fahadiovana.
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia ampahany lehibe amin'ny drafitra fitantanana maharitra. Tamin'ity taona ity, nanomboka ny volana septambra ka hatramin'ny novambra lasa teo, L'Heure Bleue dia nanohana fampirantiana sary manasongadina ny biby an-dranomasina sy ny zavamaniry. Ny ampahany amin'ny vola azo avy amin'ny varotra dia nomena an'i MADA Megafauna ONG iray izay manao fandalinana siantifika momba ny karazan-javamaniry ao amin'ilay faritra misy ny antsantsa trozona, trozona, stingray ary antsantsa vato harana. Raha nampiasaina kosa ny vola hafa ho an'ny fanabeazana izay nandanian'ireo zanaky ny distrika tontolo andro ny momba ny antsantsa trozona.
L'Heure Bleue dia mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika tontolo iainana sy sosialy eo amin'ny fiarahamonina. Ny trano dia miara-miasa amin'i Miaraka, fikambanana manampy ny tanora avy any Madirokely sy Ambatoloaka amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana, ary ireo tetik'asa hafa izay mitarika fampandrosoana ara-toekarena. Ny L'Heure Bleue dia manohana ara-bola ihany koa ny klioban'ny fanatanjahantena isan-karazany ao amin'ny nosy sy ny fikambanana toy ny foara ny sekoly frantsay sy ny fetibe mozika ary ny fifaninanana dihy karakarain'ny aliansa frantsay.
Manitatra ny tamba-jotra amerikana avaratra amin'ny alàlan'ny zotra transborder vaovao ny Air Canada
Fihaonamben'ny fizahantany UNWTO ao Jamaika: Transcript of the Declaration Montego Bay…